amantombazane asemancane nabesifazane abadala babevamile ukuphuma zibuze lo mbuzo: "Kungani shelled izingono zawo, futhi ukulunywa livela? Futhi yini okufanele uyenze ngakho? ". Yini ebangela ukulunywa ecasulayo phezu kwesifuba? Kukhona izimbangela eziningana ukulunywa futhi flaking phezu ingono webele. Nampa:
- chemical ngokucasuka
- ukusabela iguliswa amakhemikhali.
Yokungezwani komzimba, lapho shelled izingono kungaba kusuka imikhiqizo ukunakekelwa umzimba. Laba basizi yezimonyo namakhemikhali zihlanganisa amashampu, izimpushana, insipho, okhilimu, lotions, balms nezinye.
Izinto ezibangela ukulunywa we izingono, ngaphandle eshiwo ngenhla kuyasebenza sebuningini yokucasuka zamakhemikhali, contact dermatitis ngisho eczema. Ngezinye izikhathi isikhumba lula iba ezomile. Kujwayele bome isiseduze ingono, njengoba kule ndawo isikhumba kuyinto ebucayi kakhulu. Matter futhi inqubo uyaxebuka le izingono.
Uma ikhasi le izingono, sibheke yakho "amakhalenda njengabesifazane," kungenzeka ukuthi maduze nobaba ngokuya esikhathini. Le nkinga kungenzeka esikhumbeni lapho amabele zigcwala (ngaphambi nge-ovulation), bese isikhumba eqhubeka. Udinga ukhilimu, uwoyela noma umzimba elangeni ukufezekisa ebeleni.
Esinye isizathu sokuba uyaxebuka kungenzeka ukucasuka kwezingubo zangaphansi (ubhodisi). Mhlawumbe Indwangu kusuka kulo senziwa, ngokwalo allergenic. Zama ibhodi eyiyo eyenziwe ukotini, kungase kuphele izingono ukuluma. Ukuqeda ukulunywa futhi flaking ka izingono kungaba, bezihlikihla izingono decoction of chamomile. izingono ukulunywa - ngokuvamile umphumela ukuvuvukala noma ukuluma kwesikhumba kwabanye allergen. Angase kuhambisane ukuqubuka, ukuvuvukala, ububomvu, ukuncinza, ukuzwela anda futhi ubuhlungu. Kungenzeka futhi ukuvela uqweqwe phezu kwebele.
Uma ikhasi le izingono, ayebonakala ukulunywa, ngaso sonke isikhathi kufanele uthintane mammologist. Izizathu ukuthi kubangelwa ushintsho olunjalo zingase zihluke, ngokulandelana, kanye nokwelashwa, futhi, ngakho-ke kungcono ukuba baphendukele ochwepheshe. Mhlawumbe yisifo webele noma ukuntuleka kwamavithamini, futhi mhlawumbe uhlobo inkinga dermatological.
ukulunywa Sinzima futhi flaking ka izingono kungase kusekelwe isizathu banal: lokhu kungaba ukukhula kwebele lapho othile osemusha kusukela amantombazane. Kungenzeka uma futhi zichithe kusukela ingono. Lesi sici kungaba uphawu lwesifo esibi, kodwa ngaso sonke isikhathi. Phela, ukwabiwa yobisi nezindlala libhekene, ngakho ningatatazeli ngokushesha. Uma intombazane ngalesi yobudala yabonakala ingono isikhumba esomile, kungcono usabona wezifo zabesifazane, ubani oyakuninika iseluleko esifanele ukunakekelwa kwesikhumba esifubeni wathumela luhlolo uma kudingeka.
Isikhathi esining impela izingono silume ngesikhathi sokukhulelwa, ngesikhathi lapho kukhona kabusha uhlelo hormone. Njengoba ubisi lwebele iqala ukugcwalisa, isikhumba kule ndawo sisalokhu, ekushintsheni usayizi webele. Yingaleso sikhathi, futhi zingavela ukulunywa futhi izingono flaking. Phakathi nenkathi yokukhulelwa, kungokwemvelo. Uma webele itches njalo, kuba imbangela enkulu ukuze athole ukwelashwa kudokotela.
Izindlela ephumelela kunazo ulwe ukulunywa amabele, baqala ukusebenzisa imithi ehlukene kanye amakhambi abantu ukuthi ukunciphisa umphumela we ingqondo. Ngo narondoy imithi kungenzeka esesula Iziphungo lekastvennyh amakhambi, douches, futhi ukungenisa sedatives (isib, Leonurus). Akumele nje massaging futhi ecwaninga esifubeni, sebenzisa Scrubs - lokhu kwenza isimo sibe sibi. Usizo Good "Avent", ukhilimu esithambile.
Kukhona uphawu kazwelonke, uma it is emibi webele ngakwesokunxele, bese kini uyakhumbula ethandekayo, uma ilungelo - ushintsho. Yiqiniso, lena ihlaya, kodwa kuleli zwe, ayikho ngiyingane yini lo muntu? Kungcono kwesinye ukumamatheka, ecabanga impilo - kuyoba usizo!
Ngo sikashukela nawe ungadla? Thayipha sikashukela 2 - Ukudla. Imenyu - sikashukela sohlobo 2
Amafinyila kusukela ingquza. izizathu
Tailbone kakhulu olimele: Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela
Buns nge poppy imbewu imvubelo inhlama: iresiphi
Lesi sakhiwo yisona Archaeological Museum yase-Cuenca, ukukhangana esemqoka yedolobha